မေ့သွားတဲ့ Gmail Password ကို ပြန်ယူရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » မေ့သွားတဲ့ Gmail Password ကို ပြန်ယူရအောင်
မေ့သွားတဲ့ Gmail Password ကို ပြန်ယူရအောင်
Posted by မောင်လင်းငယ် on Sep 12, 2010 in Computers & Technology, News |2comments
Gmail password အကြောင်း New
မကြာခဏဆိုသလို သင့် စကားဝှက်ကို ပြောင်းပါ လို့ သူတို့က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်က ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
ယခု ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က သင့်မှာ ရှိတဲ့ စကားဝှက် ကို သင် မှတ်မိတယ်။ ပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လက စကားဝှက်ကိုတောင် သင်မှတ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခု လက်ရှိ စကားဝှက်ကို ရော? ဘယ်သူ သိသလဲ?
Gmail သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက သင်ကို ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေ့သွားတဲ့ Gmail စကားဝှက်ကို ပြန်ရယူပါ။
မေ့သွားတဲ့ Gmail စကားဝှက်ကို ပြန်လည် လုပ်ဖို့;
၁။ သင့် Gmail အကောင့် အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒုတိယမြောက် အီးမေးလိပ်စာ ( secondary email address ) ရှိသလား ဒါမှမဟုတ် (၅) ရက်လောက် သင့် Gmail အကောင့်ကို Log in မ၀င်ရသေးဘူးဆိုတာ သေချာအောင် လုပ်ပါ။
၂။ Gmail Log in စာမျက်နှာကနေ I cannot access my account ဆိုတဲ့ Link အတိုင်း လိုက်နာပါ။
၃။ I’ve forgotten my password ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။
၄။ သင့် Gmail user နာမည်ကို Username အောက်တွင် ရိုက်လိုက်ပါ။
၅။ Summit ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
၆။ ပုံအောက်တွင် ရှိတဲ့ ကွက်လပ်ထဲတွင် Captcha ထဲက စာလုံးကို ရိုက်လိုက်ပါ။
၇။ Summit ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
၈။ သင်တွင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒုတိယမြောက် အီးမေးလိပ်စာ ရှိတယ် ဒါမှမဟုတ် မရှိဘူးပေါ် မူတည်ပြီး
သင့် ဒုတိယမြောက် အီးမေး အကောင့်ထဲက Google Password Assistance စာကို ဖွင့်လိုက်ပြီး အဲဒီထဲက စကားဝှက် ပြန် ပြောင်းတဲ့ Link အတိုင်း လိုက်နာပါ။ ဒါမှမဟုတ်
သင့် လုံခြုံရေး မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ရိုက်လိုက်ပြီး Summit ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
၉။ New password နဲ့ Re-enter password အောက်တွင် လိုချင်တဲ့ စကားဝှက်အသစ်ကို ဖြည့်လိုက်ပါ။
၁၀။ Reset password ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒုတိယမြောက် အီးမေးလိပ်စာမပါဘဲ လွန်ခဲတဲ့ ငါးရက်လောက်က သင့် Gmail အကောင့်ကို သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်အနေနဲ့ နောက်ထပ် ငါးရက်လောက် စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယမြောက်လိပ်စာနဲ့ လုံခြုံရေး မေးခွန်းကို သင့်အဖြေနဲ့ က အလုပ်မလုပ်ဘူးလား။
ဒုတိယမြောက် အီးမေးလိပ်စာကနေ ဒါမှမဟုတ် သင့် လုံခြုံရေးမေးခွန်းကို ဖြေလိုက်ပေမယ့် Gmail စကားဝှကို သင် ပြန်ပြီး မပြောင်းနိုင်ဘူးလား။
၁။ သင်က မှန်ကန်တဲ့ အကောင့်ကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ သေချာအောင်လုပ်ပါ။
စာလုံးပေါင်းမှားနေလားလို့ အကောင့် နာမည်ကို စစ်ဆေးပါ။
လုံခြုံရေး မေးခွန်းနဲ့ အကျွမ်းတ၀င် ရှိသလား။
၂။ တတ်နိုင်သလောက် သင်က အကောင့် ပိုင်ဆိုင်သူဆိုတာ သူတို့ကို လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ Contact Google လုပ်ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင် Gmail အကောင့်ကို Hack လုပ်ခဲ့ပါသလား။
သင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒုတိယမြောက်လိပ်စာမှာ စကားဝှက် ပြန်ပြောင်းဖို့ အတွက် အီးမေး မရခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ ငါးရက်ကြာပြီး သင့် အကောင်ထဲကို Log in လုပ်လို့ မရခဲ့ဘူး။ ဒါဆိုရင် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူက သင့် Gmail အကောင့်ထဲကို ခိုးဝင်ခဲ့တယ်လို့ သင် ယုံကြည်တယ်ပါက this structured form နဲ့ Gmail ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
မိုက်တယ်ဗျာ.။။။။။။။။။အဲ့လိုမျိူးလေတွေ အရမ်းတွေ့ချင်နေတာ ပြောပြမဲ့လူမရှိလို့ဗျ။ဟီး ဟိး…….။အဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ ထဲမှာ တိတ်မရှင်းသာလေးတွေရှိသေးတယ်ထင်တယ်ဗျ။နားနည်းနည်းရှုတ်နေတယ်ဗျ။ပြောပြပေးလို့ ကြိုးစားပြီး လုပ်ကြည့်ပါ့မယ်။
သိချင်တာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အသစ်ပြောင်းထားတဲ့ password ကိုမေ့နေတယ်ဆိုပါစို့ ။ secondary email address ကလည်း သူငယ်ချင်းဟာ အခုတော့ အခေါ်ပြောမရှိတော့ဘူးပဲထားပါဦး … ။ security question ကလည်း အကောင့်လုပ်တုန်းက သူငယ်ချင်းပေးထားခဲ့တော့ မသိပြန်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့များ ပြန်ရှာလို့ရမလဲ ပြောပါဦး … ။ အဲ့ဒီလို မျိုး password မေ့သွားခဲ့ဖူးလို့ပါ ။